राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे सन्देश : संसद फेरि पनि जिउँदो नरहन सक्छ « Janata Samachar
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएको मंगलवारको सर्वदलीय बैठकले संसद फेरि पनि जिउँदो नरहन सक्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रपतिले ‘कोभिड– १९ पछि सामूहिक छलफल नभएको र आफू बंगलादेशको भ्रमणमा जान लागेकोले सर्वदलीय बैठक बोलाएको बताउनु भएपनि बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएका भनाइहरुले संसद फेरि पनि जिउँदो नरहन सक्ने सन्देश दिएको हो ।
राष्ट्रपतिले शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्ने बेला आएको र त्यसैका लागि आफू बंगलादेश जान लागेकोले सल्लाह गर्न बैठक बोलाएको बताउनु भए पनि नेताहरुले संसदको असंवैधानिक विघटन, सरकारले पुन:स्थापित संसदलाई बिजनेस नदिएको विषय र प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने या नगर्नेबारे के सोच छ ? जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए ।
बैठकमा सहभागि नेताहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार निर्माणको जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को भनेर थप प्रस्ट पारेको तर संसद्ले सार्वभौम अधिकार अभ्यास गर्न नपाउँदै फेरि विघटन गर्ने कोणबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा राय राखेको बताएका छन् । नेताहरुले ओलीले संसदले काम गर्ने अवस्था नभएको र फेरि पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएपछि राष्ट्रपतिले ओलीकै भनाइसँग मेल खाने गरी ‘लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन’ भन्नुले सार्वभौम संसदको फेरि पनि हत्या हुनसक्ने सम्भावना बढेको आशंका गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणका लागि शुभकामना मात्रै दिनु भएको थियो । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद् विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नुभएन । अहिले यो छलफलको के अर्थ ? संसद् पुन:स्थापना भएको छ, अब अहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो ? के परामर्श चाहियो ?’ भन्दै सर्वदलीय बैठकको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । पौडेलको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘मैले त संविधानअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेकी हुँ ।
बैठकमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैठकले छलफलको विषयभन्दा बाहिर प्रवेश गरेको बताउँदै जे विषयका लागि बैठक बोलाइएको थियो र जे विषयमा छलफल भयो त्यसमा तालमेल नमिलेको बताउनु भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले जसरी सुरु गर्नुभयो, छलफल मलाई ठिक लागेन । छलफल अनुचित, अप्रिय र अनुपयुक्त लाग्यो । म धेरै छलफल गर्न चाहन्न । यो अनावश्यक विषयमा बहस गर्ने थलो होइन ’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।
पुन:स्थापनापछि संसद प्रभावकारी भएन: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चबाट संसद् पुन:स्थापनाको फैसला हुनु सर्वोच्चको निर्णय भएको तर, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान त छ नि ? भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुभएको थियो ।
‘लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि २ वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि  ? संसद् पुन:स्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । काम गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौँ ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
ओलीले यसरी फेरि ताजा जनादेशको बाटोमा जानुपर्ने कुरा गर्नु भएपछि कांग्रेस नेता पौडेल पुनः कड्किनुभएको थियो । पौडेलको ओलीलाई प्रश्न थियो ‘फेरि चुनाव गरेर आएको अर्को संसद् पनि यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?’